Wedka dila saxafiga iyo mihnaddiisu waa beenta (WQ: Barkhad M. Kaariye) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Wedka dila saxafiga iyo mihnaddiisu waa beenta (WQ: Barkhad M. Kaariye)
Wedka dila saxafiga iyo mihnaddiisu waa beenta. In qofka saxafiga ahi been sheegaa siyaabo kala duwan ayay ku timaaddaa; in uu kas u sameeyo iyo in uu kama’ amma hubsiimo-la’aan u sameeyo – labadaba anshaxa mihnaddu wuu ka digaa. Si ay ku timaaddo ba, beentu waa wedka sumcadda iyo mihnadda weriyaha. Intaasi idinkuma cusba, waxa se u baahan inaynu u dhug yeellano arrinta dambe oo si fudud loogu dhaco, gaar ahaan warbaahinta casriga ah ee baraha bulshadu ka mid yihiin ayaa sahla in qaladkaasi dhaco. War baa qof soo qorayaa isagoon raacin cidda uu ka soo xigtay, sidii uu u sheegay wax baa iska beddelaya amma sidii uu u sheegay si aanay ahayn baa soo baxaysa! Waa sababaha aan u sibir-saaro in qof saxafi ah oo war soo qoray dadku ugu qoraan; ‘Source’ ‘Caddeyn soo raaci’ IWM – Xitaa haddii aan isaga ma-jirto looga baran, saxafi kale ayaa laga arkay oo u soo jiiday.
F.G: Waxa laga yaabaa inaanan wax cusub sheegin, waxase hubaal ah inaynu dhammaanteen u baahannahay inaynu dabbaqno! Inaad ogaato/taqaanno waxa ka quman, kana waxtar badan inaad shaqada ku dabbaqdo. #AnigubaShalay